Kenya, Ethiopia iyo France oo ku muransan Cidda Xakumaysa Kismaayo haddii la qabsado kaddib
"Sheikh Shariif waxa uu Afka-baarkiisa ka muujinayaa in uu ka soo horjeedo gelitaanka Kenya, laakiin hoos ahaan waxa uu ka taageersan yahay weerarka Kenya ku qaaday Soomaaliya" Jariidadda The EastAfrican.
Tarjumadii SomaliTalk.com | Isha: The EastAfrican | Oct 30, 2011
Sawirka: The EastAfrican October 30, 2011 (English Read here)
Ayadoo toddobaadkii saddexaad uu galay hawlgalka Militariga Kenya ka fulinayaan Koonfurta Soomaaliya, ayaa jariidada ka soo baxdo Nairobi, The EastAfrican caddadkeedii soo baxay Axad October 30, 2011 waxay qortay warbixin dheer oo ay ka soo xigatey dublomaasiyiin, saraakiil dawladda iyo hay'adaha sirdoonka, kuna saabsan in dagaal wajiyo badan leh (dagaal maqaar-saar ah / proxy war) ka dhalan karo haddii Kenya qabsato magaalada Kismaayo. Waxaana muranku ka jiraa labada nin Maxamed Cabdi Gandi iyo Axmed Madoobe oo ay kala taageersan yihiin Faransiiska, Itoobiya iyo Kenya, iyo qorsha Kenya ee samaynta aagga ood-celinta ah ee Jubbaland ama Azaaniya- Qoraalka oo cinwaankiisu ahaa "Why capturing Kismayu could trigger proxy wars for Kenya" ayaa SomaliTalk.com tarjumtey qoddobo kamid ah.
Jariidadda The EastAfrican ayaa qortay sidan:
Qabsashada Kismaayo oo Sababi Kara Dagaal Wajiyo Badan oo Maqaar-saar ah
Markii aan waraysanay dublomaasiyiin, saraakiil dawladda iyo ilo sirdoonka ee gobolka, waxaa soo shaac baxay sawir waadax oo cadaynaya in dagaalka Kenya ay qorshayneysey shan sano ee la soo dhaafay, taas oo lagu doonayo in si weyn wax loo bedelo qaabka dalka Soomaaliya (oo si qaabkii hore ka duwan loo qaabeeyo Soomaaliya).
Eeg Khariidda Soomaaliya oo weyn (Riix) - pdf
Qaabkaas oo ah: in marka laga reebo Somaliland iyo Puntland in Soomaaliya inteeda kale laga sameeyo saddex qaybood ama saddex aag-dhuleed oo kale oo cusub.
Qaybahaas dhulka ah waxay ood-celis (buffer zone) u noqonayaan Kenya iyo Ethiopia. Itoobiya waxa ay aagga ood-celinta mar hore ka samaysay aagga gobollada ka bilaabanaya Galgadud, Hiraan, Bay, Bakool ilaa iyo Gedo (Eeg khariidadda).
Militariga Kenya waxay ku hamiyayaan in ay sameeyaan aag-dhuleed oo ood-celis ah oo ka bilaabanaya gobollada Gedo El Wak, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose.
Kama dambaystana ay gobollaasi noqdaan kuwo qayb ahaan gaarkooda isu maamula, kuwaas oo ay dhici karto in ay maalin uun ka mid noqdaan Dawlad midaysan oo Federaalka Soomaaliya.
Tallaabada labaad waa kaddib marka la qabsado Kismaayo in aagga "la xoreeyey" loo dhiibo AMISOM. Arrintaas sida ay sheegeen Dublomaasiyeen waxay Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobey (QM) ku khasbi kartaa in ay AMISOM ka dhigaan ciidan hawlgal buuxa fuliya oo ugu yaraan la gaarsiiyo 20,000 askari. Ilaa hadda AMISOM waa 9,500 askari oo ku sugan Muqdisho - waxana ciidankaasi ka yimaadeen laba dal oo keliya ee Bariga Afrika ah, Burundi iyo Uganda. Waxaana jira qorshe in ciidankaas lagu daro 3,000 laakiin ilaa hadda ma jiro dal arrintaas ogolaatay in ay ka qayb qaataan.
Tallaabada saddexaad waxay tahay in AMISOM ay Soomaaliya oo la nabdeeyey ku wareejiso Qarammada Midoobey.
Safiirka Itoobiya u fadhiya Kenya Shemsudin Ahmed, ayaa Khamiistii la soo dhaafay waxa uu Jariidadda The EastAfrican u sheegay "Haddii Kenya iyo dalalka kale ee gobolku ay tahay in ay in yar xasiliyaan Soomaaliya, waxay u baahan yihiin in ay kaalmo dheeraad ah ka helaan Afrika inteeda kale iyo beesha caalamka."
Waxana uu intaas raaciyey "Markaas ayey macne samaynaysaa in lagu wareejiyo Qarammada Midoobey." Sidaas waxaa yiri safiirka Itoobiya (IN LAGU WAREEJIYO QM).
Itoobiya waa taageertay weerarka Kenya, kaas oo la mid ah qorshaheedii shan sano ka hor. Xilligeedii oo Itoobiya dagaalka ku gashay ayadoo aan taageero ka haysan beesha caalamka marka laga reebo Maraykanka, waxay kala soo kulan tahay cashar adag oo ah ka soo baratay, ayey tiri The EastAfrican.
Kaddib markii Itoobiya gashay gudaha Soomaaliya 2006 si ay ula dagaalanto Midowgii Maxaakiimta Islaamiga ah, oo uu markaas hoggaaminayey madaxweynaha hadda Sheikh Shariif Axmed, si ay taageero u siiso Dawladda Federaalka KMG oo markaas ku dhuumanaysey Baydhabo, kaddib waxaa Itoobiya baxday laba sano kaddib ayadoo canaan badani uga timid beesha caalamka.
Waxaa markaas Itoobiya xoogga saartay samaynta aagga-dhuleed ee ood-celinta (buffer zone) oo ay iska xejineyso Soomaaliya 'xuduudkeeda'. Markaas AMISOM mar haddii ay xukuntay Muqdishu, qorshahu waxa uu ahaa in aaggaas ood-celiska ah laga sameeyo Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Galgaduud.
Markaasna Kenya ay aag ay raad ku leedahay ka samayo Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, dhanka hoose ee Gedo, iyo in ay hesho dekedda furaha ah ee Kismaayo, taas oo halbawlaha dhaqaalaha u ah Alshabaab.
Si kasbataba ha ahaatee, Hawlagalka Militariga Kenya ay ka fulinayaan Soomaaliya waxa u buuxsamey laba toddobaad, waxaana dublomaasiyiinta, militariga iyo khubarada sirdoonku ay aad uga walaacsan yihiin waxa dhacaya qabsashada Kismaayo kaddib, sidee loo maarayn karaa guusha, ayey tiri Jariidaddu.
Maadaama Al Shabaab uu cadaadis ka haysto Muqdisho, isla markaasna Ciidamada Militariga Kenya ay weerar kaga hayaan Koonfurta, waxaa khubaro u sheegeen The EastAfrican in awoodda ay Al shabaab u yeelan karaan in ay ka dagaalamaan furimo badan ay aad ugu adkaan karto.
"Wax shaki ah kuma jiraan inaaan saarayno Al Shabaab," ayuu yiri mid ka tirsan AMISOM, "laakiin dhibaatadu waxay tahay sida Kenya u maaraynaso guusha. Marka la qabsado Kismaayo yaa maamulaya? Arrinta iska hor imaadka keeni doonta waxay u dhaxaysaa Kenya iyo Ethiopia" ayuu yiri.
Arrintaasi waxay salka ku haysaa laba nin, kuwaas oo la sheegay inay hor kacayaan qorshaha Jubbaland, oo ah dawlad-goboleedka ay Kenya dooneyso inay asaasto.
Labadaas nin midkood waxa uu hore Soomaaliya uga soo noqday Wasiirka Difaaca, waana "madaxweynaha"Azaniya, Maxamed Gandi, kaas oo la sheegay in ay xigsanayaan Faransiiska iyo saraakiisha Ammaanka ee Sirdoonka Kenya.
Jariidaddu waxay qortay: "Itoobiya waa ka walaacsan tahay Gandi arrin laxiriir beesha uu ka dhashay, oo waxay maanka ku hayaan dhulka Koonfurta Itoobiya iyo Gobolka Woqooyi Bari ee Kenya."
Ninka kale The EastAfrican waxay ku sheegtay Sheikh Ahmed Mohamed Islam oo loo yaqaan Madoobe, kaas oo hoggaamiya dhaqdhaqaaqa Ras Kamboni oo xiriirka la leh DFKMG.
Madoobe waxaa xigsanaya Militariga Kenya sababtoo ah waxa uu keenay ciidamo, halka Gandi uu yahay siyaasi leh xiriiro wanaagsan oo ganacsi.
In la maareeyo arrimaha maxalliga ah ee Kismaayu waxay Kenya ka dhigi karaan kuwo u horseeda in ay gasho dagaal wajiyo badan (dagaal maqaar-saar ah) oo la xiriira awood-goboleedka oo ay la gasho Ethiopia iyo Eritrea. Waxa kale oo Soomaalidu u arki karaan in Kenya tahay kuwo dalkooda qabsaday.
Waxaa jariidaddu walaac ka muujisay qabsashada Kismaayo. Waxayna markaas raacisay in Safiirka Itoobiya u fadhiya Kenya uu sheegay in muran badan uusan ka jirin cidda xakumaysa Jubbaland, taas oo uu ku andacoodey in uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo Gandi iyo Madoobe. Laakiin, waxaa halkaas The EastAfrican ay raacsisay sida walaac u jiro ayadoo adeegsatey maahmaah oranaysa "qorsha ay dejiyeen Jiirka iyo Ragu badanaa faraha ayuu ka baxaa."
Dhawr maalmood markii Kenya gashay Soomaaliya, waxaa Kenya arrin kusoo bood ah oo layaab ah ku noqotay markii uu soogelitaankaas ka soo horjeestey Sheik Shariif, waxaana Kenya ay DFKMG ka dalbatay sharraxaad ku saabsan arrintaas.
Waxaana jariidadda ay intaas raacisay in la isla dhex marayey in Sheikh Shariif uu isu muujinayey mid Muwaadin Soomaaliyeed ah, halka uu hoos ahaan ka taageerayey ficilka Kenya, waxana uu doonayey in uu xoojisto sumacadda qaranimo isagoo si muuqata uga hor imanayey soo gelitaanka Kenya, laakiin hoos ahaan u taabacsan.
Waxaana intaas Jariidadu raacisey in Sheikh Shariif uu ka walaacsan yahay in la sameeyo Jubaland ama Azania oo u dhaqmi doona sida Puntland ama Somaliland, arrintaas oo sababi karta kala qaybinta dalka Soomaaliya.
Itoobiya waxay ka walaacsan tahay cidda xakumi doonta dekedda dhaqaalaha badani ka soo baxo ee Kismaayo, taas ay ka cabsi qabto in dhaqaalahasi uu gaaro ONLF Xornima Doonka Ogaden, kuwaas oo doonaya inay ka go'aan Ethiopia kuna biiraan riyada Greater Somalia, ayey qortay jariidaddu, oo sheegtay in arrintaas uu beeniyey Safiirka Itoobiya u fadhiye Kenya, isagoo intaas raaciyey in uu "si joogto ah ula hadlo Gandi."
Waxa kale oo Jariidadu sheegtay in dublomaasiyeen ku dhaw Sheikh Shariif ay sheegeen in Shariif-ku uusan aad uga welwelsanayn Jubbaland ama Azaaniya, balse arrintu tahay aragtidiisa ku aadan Al Shabaab iyo muddadii halka sano ahayd ee loo kordhiyey DFKMG, taas ayaa saamayn ku leh oo uu arrinta Kenya ee uu ka hadlay.
Shirkii Kampala ayaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu maareeyey in kooxo Soomaali ah ay aqbaleen in DFKMG loo kordhiyo hal sano oo ka bilaabanaysey August (2011).
Waxaana dublomaasiyiintu sheegeen in Shariif "uu ku faraxsanaa in Shabaab laga cayriyo Muqdishu. Laakiin uusan diyaar u ahayn in laga guulaysto." Sababtoo ah, ayey yiraahdeen, qorshahiisa ayaa ahaa in uu Shabaab u adeegsado in uu sii haysto xukunka marka uu dhammaado halka sano ee loo kordhiyey.
Qorshaha oo ahaa, ayey yiraahdeen, in uu markaas Al Shabaab ugu baaqo xabbad joohin, kaddib ay wada hadal la galaan Shariif-ka, taas oo markaas ay tahay in la sameeyo dawlad kumeel gaar ah oo uu isagu madax ka yahay - sidaasna uu markale ku helo xilka ayadoo aan wax doorasho ah la gelin. Waxaana jariidadu intaas raacisay arrinta ay isku raaceen saraakiisha Ethiopian, Kenyan, Ugandan, Burundian iyo Amisom ee la hadlay The EastAfrican waxay ahayd in haddii heshiis dhexmaro Shariif ama TFG iyo Shabaab, markaas isaga waa u dhammaatay. Waxayna u badan tahay in markaas xilka looga tuuro hal ilbiriqsi gudahood.
Dhanka kale, Shariif iyo xubno kale oo Soomaali ah waxay ka sii fogaanayaan saaxiibadii caadiga ahaa ayagoo la xiranaya Bariga Dhexe, dhankaas iyo Turkiga. Waxaana dublomaasiyiin sheegeen sababta ay xilligan Soomaaliya ugu muuqato in nabad la gaari karo waa Turkiga. Turkigu waana dal soo kobacaya marka la eego awooda cusub ee Muslimiinta ee caalamka. Waxaana arrinta ku lug lahaanta Turkiga ee Soomaaliya ay sababeysaa in ay kor u soo kacaan kuwo loo yaqaan Secular (aan isku xukunka diin shaqo ku lahayn) iyo kuwa aan xag-jirka ahayn.
Arrinta kale oo jirta waxay tahay inkasta oo ay Soomaaliya duqaynayaan diyaaradaha aan calaamadda/summadda wadan ee Maraykanka, xilligani waa waqti uu dalka faransiisku aad ugu lug leeyahay hawlgalka Kenya.
Aan ku bilowno Gandi, waxaa loo arkaa in uu yahay nin ku jira Jeebka Faransiiska "France's man". Waxa uu ka mid yahay dadka tiro yar oo si buuxda ugu hadla Faransiiska islamarkaasna xaaskiisu ay tahay Faransiis (Frenchwoman). Waxana uu 10-kii sano ee la soo dhaafay ee uu deganaa Nairobi kharashkiisa badankiisa bixinayey Lacagta faransiiska (French money), sidaas waxaa loo sheegay jariidadda The EastAfrican.
Faransiisku Afrika waxa uu ka fuliyey arrimo muran ku jiro sida weerarkii Militariga Faransiisku ay gacanta ku siiyeen kooxda mucaaradka ee Ivory Coast bishii April ee sannadkan 2011 si xukunka looga tuuro Laurent Gbagbo loona saaray madaxweynaha hadda Alassane Ouattara.
Waxaana jariidadu intaas raacisay in Faransiisku uu doonayo in uu gacan ku yeesho Soomaaliya, mar haddii Maraykanku uusan doonayn in uu toos ugu lug yeesho marka laga reebo dagaalka cid-kale kuu fuliso iyo diyaaradaha aan cidina wadin taas oo ka dambeysey weerarkii 1992 ee waji gabaxu ka raacay.
Arrintaas in Faransiisku ku lug yeesho Soomaaliya waxay muhiimad u leedahay Kenya, ayey tiri jariidadu, waayo waxay Kenya heleysaa cid la qaybsata kharashka ku baxaya arrinta u muuqata mid daba dheeraan doonta oo qiime badani ku kici doonta, ayey qormadeedii ku gabagabaysay The EastAfrican.
Oct 30, 2011: Diyaaradaha Militariga ee Kenya oo Duqeeyey Xero Qaxooti oo ku taal Magaalada Jilib, kuna diley 12 qof oo 6 carruur ahayd..
Duullaanka Kenya waa mid salka ku haya in ay Shidaal ka Baarato Xeebaha Soomaaliya...
Shabakada BBC English ayaa qortay warbixin ay kaga hadashay Azaniya, waxayna xustay in aaggaasi yahay dhul qani ku ah Shidaal (oil). Waxaana warbixintu raacisay in Maxamed Cabdi Gandhi, wasiirkii hore ee difaaca DFKMG, waxa uu lataliye ahaan hore ugu soo shaqeeyey shirkadda Shidaalka baarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Arimahaas ayaa waxay dadka qaarkii sheegeen in dalalka Faransiiska iyo Norway ay lacag ku bixiyeen mashruuca Azania, ayey tiri warbixintu.
Markii Gandhi la weydiiyey arrintaasna waxa uu yiri "Taasi waa war la isla dhex marayo oo aan run ahayn", waxana uu intas raaciyey "Inta aan ogahay ma jiraan koox ama shirkad noo timid. Marka ay nabadi dhacdo waxaan albaabada u fureynaa shirkada caalamiga ah ee shidaalka baara. ma jiraan wax miiska hoostiisa ah.
Bishii September ayey ahayd markii Shirkadda Fransiiska ee Total ay heshiiska la gashay Kenya si shidaal looga sahamiyo aagga loo yaqaan BLOCK L5 oo 150km gudaha u gashan dhul badeedka Soomaaliya, arrintaas oo aan ilaa hadda Sheikh Shariif wax jawaab ah ka bixin.
Waxa kale oo uu intaas raaciyey in madaxwenaha DFKMG Sheikh Shariif uusan isbedel doonayn, balse waxa uu rabaa ay tahay Alshabaab.
Waraysi kale oo uu siiyey Idaacadaa British Broadcasting Corporation (BBC), qaybta Afka Soomaaliga halkan ka dheegyso
Dhanka kale jariidadda The Star qoraal ay cinwaan uga dhigtay (Why Somali President Wants Kenya Army Out) ayaa lagu xusay waraaqo ay is weydaarsadeen Sheikh Shariif iyo madaxda Kenya, kuna saabsan ciidamada Kenya tabaraysey iyo ujeedadooda.
Sidoo kale qoraaga caanka ka ah Kenya ayaa qoraal uu cinwaan uga dhigay (The Quixotic Invasion of Somalia Will Devastate Kenya) waxa uu kaga faallooday sida uu u saadaalinayo in weerarka ay Kenya ku qaaday gudaha Soomaaliya uu sababi karo in Soomaaliya ay la soo laabatoo gobolka NFD oo gumaysigii gacanta u geliyey Kenya.
Qoraallo badan ayaa muujinaya in ujeedada Kenya ay u gashay Soomaaliya ay la xiriirto batrool ama shidaal laga baarayo aagga Lamu oo la doonayo in qayb Soomaaliya ah halkaas lagu darsado. (Somalia: Oil And Interests – Shadowy Areas Lurking Behind Kenya Offensive) - Norway oil interests push Kenya into Somalia proxy war.
Waxaana Kenya sheegtay in duulaanka ay ku qaaday Soomaaliya in uusan lahayn waqti go'an oo aya ka soo baxayso. (Kenya's Operation Linda Nchi not time bound).
Dhanka kale waxaa dib loo dhigay warbixin uu soo bandhigi lahaa Kaaliyaha Xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasada, B. Lynn Pascoe, warbixintaas oo markii hore qorshuhu ahaa in la soo bandhigo 27-kii October ayaa la sheegay in dib loo dhigay ilaa 31-da October, 2011. Waxaana warbixintaas ka mid ah in Madaxda Soomaaliyeed loogu baaqi lahaa in ay ku dhawaaqaan aagga dhaqaalaha ee Badda Soomaaliyeed cabbirkeeda.... "The report also calls on Somali authorities to declare an exclusive economic zone off the Somali coast and take other steps to enhance maritime security, such as acceding to relevant international conventions." Akhri (Somalia Briefing and Consultations Postponed.)
The French link in the Somali war: Sarkozy extends sphere of influence in Anglophone Africa
Saitoti, Wetang’ula and Haji profiles rise, but will war help their careers?
Opposed to Kenya’s military incursion into Somalia (Statement from Kenyan writers and public intellectuals)
Shock and awe in Somalia? Sorry, it isn’t a board game
When the drums of war beat, take a break from the patriotic dance floor
Legal pitfalls in pursuing Al-Shabaab across border